Paska 2019 hieren-doza miaraka amin’ny Polisim-pirenena Malagasy » Police Nationale
TAMBAJOTRAN-JIOLAHY MPANAFIKA, MPITAINGINA SCOOTER NIKASA HANDROBA VOLA 600.000.000 Fmg TRA-TEHAKY NY POLISIN’NY COMMISSARIAT CENTRAL ANTSIRABE 26 août 2019
TOVOLAHY MPANENDAKA VOASAMBOTRY NY POLISY NANAO FISAFOANA TENY ANTOHOMADINIKA TAMIN’NY 9ORA SASANY ALINA 23 août 2019
FIKAONAN-DOHA ETO ANIVON’NY MINISTERAN’NY FILAMINAM-BAHOAKA ENTINA HAMOLAVOLANA NY PAIK’ADY SY FOMBA FIASA VAOVAO 22 août 2019
« FANAOVANA PASIPAORO HOSOKA
COMMISSARIAT DE LA SECURITE PUBLIQUE IHOSY »
Paska 2019 hieren-doza miaraka amin’ny Polisim-pirenena Malagasy
Vao nandray ny asany ny Tale Jeneraly vaovaon’ny Polisim_pirenena : Ny Commissaire Divisionnaire de Police RAKOTOZANANY Dany Marius dia hiatrika avy hatrany ny fampandriam-pahalemana ny fetin’ny Paska. Fepetra 03 lehibe no nambarany ho an’ny be sy ny maro sy ho an’ny Polisim-pirenena manontolo ho enti-miatrika am-pilaminana ity fetin’ny Paska 2019 ity.
1- Mitohy ny asa fanabeazana ny olom-pirenena ataon’ny Polisy mba hahafahan’ny tsirairay avy mahalala ny andraikiny ao anatin’ny fitandroana ny filaminana amin’ny ankapobeany.
2- Handray fepetra manokana ny eto anivon’ny Polisim-pirenena amin’izao an-katoky ny fetin’ny Paska izao sy mandritra ny fankalazana izany fety izany, amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary indrindra indrindra amin’ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana.
3- Ho hentitra ny Polisim-pirenena amin’ny fampanajana ny fitsipika rehetra sy ny aro lozan’ny fifamoivoizana mandritra izao vaninandrom-pety izao.
Nananambara ny Talen’ny filaminam-bahoaka fa Polisy maherin’ny 3000 no hahetsika manerana an’i Madagasikara hiantoka ny fandriampahaleman’ny fetin’ny Paska 2019. Ho ambenana avokoa ireo toeram-pivavahana rehetra an-tanan-dehibe mandritra ny herinandro masina. Mandritra ny andron’ny Paska sy ny alatsinain’ny Paska kosa, dia ireo toeram-pitsangatsanganana rehetra mahavory olona sy toerana filanonana no hiandraiketan’ny Polisy. Hanemotra ny arabe ny Polisy handrindra sy hampanaja ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana.
Teo am-pamaranana dia nanentana ny vahoaka tsy an-kanavaka ny Tale Jeneralin’ny Polisim-pirenena mba samy handray ny andraikiny avy ho fisorohana ny loza sy hitandroana ny filaminana. Nangataka koa izy mba haneken’ny tsirairay avy ny fandaminana rehetra apetraky ny Polisy mba ho Paska hieren-doza tokoa ity Paska 2019 ity.
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=12894